MKV cutter: Olee otú Bee MKV Files (Windows 8 gụnyere)
> Resource> Video> otú bee MKV Files (Windows 10 gụnyere)
"M nwere 2700 MB ndụ egwu faịlụ na MKV Ọkpụkpọ na mkpa bee ọ bụla song iche iche ma gbaa ya n'ime a DVD na nke ọ bụla DVD ọkpụkpọ nwere ike na-agụ. My ajụjụ bụ otú bee ya n'ime iche iche faịlụ na àgwà emebibeghị. Onye ọ bụla nwere ike inyere ? "
Enwe nsogbu yiri nwoke n'elu? Echegbula. Ke ibuotikọ emi, ị ga-amụta otú bee MKV faịlụ n'ime ọtụtụ agba seamlessly na effortlessly (Windows 10 gụnyere). Bee MKV faịlụ, i kwesịrị ihe dị oké MKV cutter na gị fingertips. Ebe a, ị nwere ike nweta dị ike otú ahụ MKV video cutter ozugbo. Dị nnọọ ibudata ma wụnye a smart Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac), na wee soro nkuzi n'okpuru ịrụcha MKV ịkpụ ọrụ nzọụkwụ site nzọụkwụ.
1 Mbubata a MKV faịlụ ka a MKV cutter
E nwere ihe abụọ mgbanwe ụzọ mbubata gị MKV faịlụ site na kọmputa na-a MKV video cutter. Na otu onye bụ pịa "Tinye Files" nhọrọ iji mara na MKV faịlụ na ị chọrọ, ndị ọzọ bụ ịdọrọ MKV faịlụ ka a na ngwa ekpe ebi ndụ.
2 Cut MKV faịlụ
Bee a MKV faịlụ ka clip ị chọrọ, ị mkpa pịa Dezie bọtịnụ na video item mmanya mbụ. Na, na, na mmapụta edezi window, i kwesịrị karị ịdọrọ abụọ sliders mmalite na ọgwụgwụ nke video clip ị chọrọ. Ke akpatre, pịa OK comfire ya.
Cheta na: Iji ịmata ọdịiche dị iche iche mkpachị, ị ga-mma nyegharịa ha. Iji mee ya, dị nnọọ clip faịlụ aha na video item mmanya, na mgbe ahụ pịnye faịlụ aha ị chọrọ.
3 mbupụ otu MKV clip
See format na akara ngosi na mmepụta Format ebi ndụ, họrọ MKV dị ka mmepụta format, wee pịa "tọghata" bọtịnụ na ala-nri akuku nke isi interface mbupụ ọhụrụ MKV faịlụ. Mgbe ahụ, i nwere ike imeghe a ngwa si mmepụta nchekwa ịchọta ọhụrụ faịlụ.
Mbubata mbụ MKV faịlụ ugboro ugboro na-ekpeghachi ịkpụ na mbupụ ọrụ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike bee MKV n'ime multiple mkpachị na karị ịzọpụta ha n'ime a dị mfe faịlụ.
Cheta na: Nke a MKV video cutter na-enye gị ihe edezi ọrụ, dị ka bugharia, akuku, jikota MKV faịlụ, tinye aha, video mmetụta na watermark wdg-enweta ihe Atụmatụ si: Dezie MKV faịlụ >>
Olee otú Tinye Photos ka Audio
Atụ aro Video Ntụgharị Alternative
Fast Video Editor: Olee dezie Video na a Fast Way
Windows Movie Onye kere maka Mac - Ime Fantastic Movies